Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021) – MM Subtitles
Video Sources 19020 Views Report Error
တစ်ချိန်က နာမည်ကျော် G.I. Joe ရုပ်ရှင်တွေကို reboot ပြန်လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ Snake Eyes: G.I. Joe Origins လာပါပြီ။ Crazy Rich asians, Last Chirstmas တို့နဲ့ အမျိုးသမီးထုကြီးရဲ့ နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ Henry Golding က Snake Eyes အဖြစ်ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားပါတယ်။
ငယ်စဉ်ကတည်းကလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုကြောင့်ဖခင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့၊ ကလဲ့စားချေဖို့ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ ရှေးဟောင်းဂျပန်ဂိုဏ်းအနွယ် Arashikage မိသားစုရဲ့ဆက်ခံသူကို ကယ်တင်မိသွားရာက အဲ့ဒီမိသားစုထဲကို ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိသွားခဲ့တဲ့ သူဟာ ဖခင်ကိုကလဲ့စားချေဖို့အကြံနဲ့ အဲ့ဒီမိသားစုထိန်းသိမ်းထားတဲ့ တန်ခိုးကြီးရှေးဟောင်းရတနာတစ်ခုကို ခိုးဝှက်ဖို့ကြိုးစားရင်း Cobra အဖွဲ့၊ G.I. Joe အဖွဲ့တို့ရဲ့အားပြိုင်မှုတွေနဲ့အတူ သူ့အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်း ပဟေဠိတွေကိုပါ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြပုံတွေကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။
ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းလိုအပ်ချက်တွေရှိပေမယ့် ဖျော်ဖြေမှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းကားကောင်းတစ်ကားပါ။
Duration……..: 22h 1min
Download 🔥 4K ⚡Fast Drive 4.60 GB
Download 🔥 4K G Drive 4.60 GB
Download 🔥 4K Solid Drive 4.60 GB
Download 🔥 1080p 5.1CH ⚡Fast Drive 1.88 GB
Download 720p ⚡Fast Drive 761 MB
Download 480p ⚡Fast Drive 446 MB
Download 🔥 1080p 5.1CH G Drive 1.88 GB
Download 720p G Drive 761 MB
Download 480p G Drive 446 MB
Download 🔥 1080p 5.1CH Solid Drive 1.88 GB
Download 720p Solid Drive 761 MB
Download 480p Solid Drive 446 MB